Ahoana ny fomba fiasa tsy misy torimaso: toro-hevitra 15 hiadiana amin'ny tsy fahampian'ny torimaso - -Kevi-Pitantanana
Ahoana ny fomba fiasa tsy misy torimaso: toro-hevitra 15 hiadiana amin'ny tsy fahampian'ny torimaso
Matory torimaso ianao ary tsy afa-mihetsika.
Na angamba tsy natory mihitsy ianao omaly alina.
Ary ankehitriny dia tsy maintsy miatrika ny andro ho avy ianao… manatanteraka ny asa aman-draharahanao mahazatra.
Angamba mila miasa ianao. Na angamba manan-janaka karakarainao.
Na izany na tsy izany, ahoana marina no handraisanao ny andro?
Inona no azonao atao mba tsy ho tafavoaka velona fotsiny, fa hiasa toy ny olombelona mahazatra?
Tsy mora ny miatrika tsy fahampian'ny torimaso, fa ny toro-hevitra manaraka dia afaka manampy anao handresy ny havizanana.
Raha tsy dia manana angovo betsaka ianao dia azonao atao ny manandrana mampiasa tsara izay anananao.
1. Miomana amin'ny ady ara-tsaina
Ny fiatrehana ny tsy fahampian'ny torimaso dia, ady lehibe voalohany.
Ankoatr'ireo torohevitra rehetra manaraka, ny fanamby lehibe indrindra dia ilay hatrehinao ao an-tsainao.
Ary tsy miresaka momba ny fahatsapana ho reraka tanteraka fotsiny izahay fa miresaka momba ny eritreritra sy ny fahatsapana anananao.
Ny toe-tsainao dia tsy hitovy amin'ny torimaso kely na tsy misy torimaso amin'ny maha-izy azy rehefa miala sasatra tanteraka.
Ny fahazoana an'io sy ny fahafantarana izany fahasamihafana izany dia zava-dehibe amin'ny fomba fiasa mandritra ny andro.
Toy ny ady na fanamby rehetra dia ho tsara kokoa ianao raha miomana amin'izany.
Midika izany fa ny fampiasana zavatra toy ny firesaka tena tsara dia handrisika anao amin'ny fotoan-tsarotra ho avy.
Midika koa izany fa ny fahafantarana ny fetranao rehefa ao anatin'ity toe-javatra rendremana ity fa tsy manery mafy ny tenanao.
Zava-dehibe ny hatsaram-panahy, toy izany koa ny fahaizana mamantatra rehefa mihetsika avy amin'ny toerana reraka ianao mba hahitanao ny fitonianao.
Noho izany, ny fahatsiarovan-tena rehefa mahasosotra anao ny mpiara-miasa aminao dia lakilen'ny fitadiavana fomba hamahana izany fahatsapana izany.
Toy izany koa, ny fahafantaranao rehefa milentika ambany kokoa ny angovo anao dia handrisika anao hanao zavatra hanomezana tosika azy ireo (amin'ny fampiasana ireo torohevitra manaraka).
Ny toe-tsaina tokony hiezahanao hamelomana dia iray amin'ny faharetana manoloana ny fitsapana. Handalo io fotoana sarotra io ianao amin'ny fomba hafa na amin'ny fomba hafa.
2. Aza mijery ny famantaranandro
Raha jerena ny teboka teo aloha dia andao aloha hanomboka amin'ny sasany amin'ireo olana ara-psikolojika izay hatrehanao rehefa tsy ampy torimaso ianao, alohan'ny hitodihana ny saintsika ho amin'ny lafiny ara-batana.
Iray amin'ireo sakana ara-tsaina mahazatra indrindra ny fahatsapana fa mandalo miadana tokoa ny andro.
Rehefa dinihina tokoa, ianao dia te-hatory fotsiny ary ny alina tsy ho avy tsy ho ela.
Ka araho tsy tapaka ny fotoana hahitanao hoe maharitra hafiriana mandra-pahatonganao matory.
Fa hevitra ratsy io.
Na misintona ny andro fiasanao na tianao fotsiny izao ny hiverenan'ny raharaha dia mihisatra ny fandehanan'ny fotoana ara-tsaina vao mainka hitanao ny tena fotoana.
Miezaha hanaraka ny torohevitra ao amin'ny lahatsoratray momba izany mandeha haingana kokoa ny fotoana .
3. Manampy isan-karazany amin'ny andronao
Rehefa tsy nahita torimaso ianao dia tsy hisy hahatonga anao hahatsiaro reraka kokoa noho ny monotony amin'ny asa miverimberina.
Zava-dehibe tokoa ny fiezahanao handrava ny andronao araka izay azo atao.
Hall of laza 2017
Mety ho sarotra izany any amin'ny tontolon'ny asa sasany, fa ataovy izay rehetra azonao atao hanovana matetika ny zavatra.
Amin'ny toerana misy ny birao dia mety mifoha eo amin'ny latabatrao ianao, manamboatra kafe iray kaopy, miresaka amin'ireo mpiara-miasa aminao, mankany amin'ny trano fidiovana, na mandany minitra vitsy any ivelany.
Amin'ny antsinjarany, angamba azonao atao ny manontany amin'ny mpanara-maso anao raha afaka miovaova eo anelanelan'ny famerenana ireo talantalana ianao, mitantana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, mipetraka amin'ny fizahana, na mampidina entana ao amin'ny trano fitehirizana.
Raha mikarakara ny zanakao kely ianao dia miezaha mivoaka amin'ny lalao kilalao, mankanesa any amin'ny valan-javaboary, ento miantsena fivarotana enta-mavesatra, mandeha an-tongotra amin'ny fivarotana kafe, mitsidika namana na fianakaviana, na milalao amin'ny efitrano samihafa ao an-trano fotsiny fa tsy mifamatotra amin'ny toerana iray foana ianao.
Arakaraka ny isan-karazany azonao ampidirina amin'ny andronao dia tsy hampihena ny sainao ho modely autopilot ianao.
Hanampy anao mailo hatrany izany ary hahatonga ny fotoana ho toa mandeha haingana kokoa.
4. Tsory ny andronao
Raha mbola tsy natory mihitsy ianao tamin'ny alina, dia tsy anio ny hanaovana zavatra mandoa hetra ara-tsaina loatra.
Ho simba ny fifantohanao ary tsy eo ny fahaizanao misaina.
Ka araho io asa sarotra io amin'ny andro iray hafa - indrindra raha misy fikafika maharitra izany.
Aleo mifikitra amin'izay zavatra tsy dia manandanja loatra ary afaka manao izany ianao nefa tsy mieritreritra be loatra.
Fotoana tsara izao hanaovana ireo asa kely rehetra izay tsy hitanao mihitsy satria variana amin'ny zavatra hafa ianao.
Any am-piasana dia mety hidika ny famafana ny boaty fampidirana anao, ny fandaminana izany antontan-taratasy eo amin'ny latabatra izany, na ny fivoriana tsy misy fanakianana miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao.
Ao an-trano dia azonao atao ny misafidy ny manadio ny vata fampangatsiahana, manapaka ny bozaka, na mametraka entana tsy ilaina ilaina amidy amin'ny Internet.
Ary raha tsy manan-tsafidy fotsiny ianao fa ny hiatrika zavatra sarotra ara-tsaina kokoa dia ataovy amin'ny maraina. Azo antoka fa hahatsapa ho reraka kokoa ianao amin'ny tolakandro.
5. Henoy ny mozika mitombina
Ny herin'ny mozika dia tsy tokony hatao ambanin-javatra amin'ny fanentanana antsika sy fanomezana antsika fiara sy tanjaka bebe kokoa.
Nahoana araka ny eritreritrao no betsaka ny mpanao fanatanjahan-tena mihaino mozika mandritra ny fotoana iasana?
Rehefa tsy manana torimaso mafy ianao dia manandrama mihaino mozika mitohy somary hafahafa.
Izy io dia afaka manampy amin'ny ady amin'ny havizanana ara-tsaina eo am-pitandremana ny sainao amin'izay asa ataonao.
Ary ny mozika koa dia manampy amin'ny fihazonana ny andro rehefa mandalo ny lalana tsirairay.
Fomba 11 hamakivakiana ny andro rehefa reraky ny asa ianao
6. Mihinàna sakafo voalanjalanja, fa avelao ny fitsaboana marobe
Andao isika izao hitodika any amin'ny fomba ara-batana bebe kokoa ahafahanao mandalo iray andro tsy hatory.
Ny ankabeazan'ny toro-hevitra mifandraika amin'ny safidinao ara-tsakafo amin'ny andro mahasasatra izaitsizy dia milaza aminao ny hihinana sakafo voalanjalanja misy proteinina, voankazo vaovao ary legioma, voanjo ary pulses
Ary io gliosida io dia tokony ho endrika varimbazaha feno sarotra raha ilaina.
Torohevitra tsara izany.
Fa ny ankamaroan'ny lazaina ho manam-pahaizana dia milaza aminao mba hisorohana ny sakafo mamy sy matavy satria hitarika fianjerana angovo any aoriana any izy ireo.
Hanosika ny fironana izahay ary hilaza aminao fa ny fitsaboana dia afaka ary tokony ho ampahany amin'ny sakafonao rehefa tsy natory tsara ianao.
Miverina amin'ny ady ara-tsaina noresahintsika tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity izany. Ny famelana anao hikarakara mandritra ny andro dia afaka manampy anao handresy amin'izany ady izany.
Na sôkôla, mofomamy, vatomamy na chips no fahafinaretanao meloka, tsy maninona ny mihinana azy ireo amin'ny antonony.
Tsy tokony hamorona ny ampahany betsaka amin'ny sakafonao izy ireo, fa kosa tokony hohanina amina habe kely eo anelanelan'ny fotoam-pisakafoanana.
Ny fitsaboana tsirairay dia fandresena ara-tsaina hanampy anao hahay handanjalanja ara-pientanam-po.
7. Milamina ny kafe kafeinina sasany
Tsy lazaina intsony fa ny kaopy kafe, na soda, na zava-pisotro misy angovo misy kafeinina dia hahatonga anao ho mailo sy mailo kokoa.
Mety maharitra fotoana fohy vao misosoka ny kafeinina, na izany aza, ka manaova fisotroana tsara alohan'ny handehananao miasa na alohan'ny hifantohanao amin'ny zavatra iray.
Misy fampandrenesana roa eto.
Ny voalohany dia mety ho tsara kokoa aminao ny mifikitra amin'ireo zava-pisotro misy kafeinina vitsivitsy ao anatin'ny iray andro fa tsy mandondona azy ireo.
Ny faharoa dia mety tsy tokony hihinana kafeina intsony ianao amin'ny harivan'ny folak'andro.
Eny, fantatray fa ity dia fotoana ahafahan'ny haavon'ny angovo milentika tokoa, fa ny kafeinina kosa dia manana antsasaky ny fiainana ao amin'ny vatanao mandritra ny 5 ora.
Ka raha manana kafe amin'ny 4 ora ianao dia mbola hanana ny antsasaky ny kafeina mikoriana manodidina ny vatanao dia tonga amin'ny 9 ora alina.
Ary izany dia afaka manakana ny torimaso anao ny alina manaraka ary mampitombo ny havizananao fotsiny.
ahoana no tsy itiavan-dehilahy
Raha tsy maintsy misotro zavatra ianao amin'ny faramparan'ny tolakandro dia manandrama dite isan-karazany fa tsy. Matetika ny kafe dia tsy dia misy kafeinina kokoa noho ny kafe ary afaka manome tanjaka kely ianao nefa tsy misy fiatraikany amin'ny torimasonao firy.
Ny fampihetseham-batana dia fomba tsara hanaparitahana ny vatokely rehetra ao an-tsainao ary hanatsarana ny toe-tsainao.
Ary tsy mila mampiasa herinao be loatra ianao vao hahatsapa ny tombony. Mandeha an-tongotra 15 minitra haingana dia ampy matetika.
Raha tsy natory mandritra ny alina ianao, dia mety ho tsara indrindra ny mampiditra ity fanazaran-tena ity amin'ny vao maraina alohan'ny andehananao miasa na manomboka ny andronao.
Ary hiadiana amin'ny faharendrehan'ny tolakandro dia azonao atao ny manandrana mihazakazaka am-polony amin'ny ora fisakafoanana.
Aza adino fotsiny ny manery ny tenanao be loatra na mitarika havizanana ara-batana hiaraka amin'ny havizan-tsainao ianao.
9. Fiainan'ny yoga matetika
Ny fanazaran-tena amin'ny yoga dia mampiasa teknika fisefoana maro, ny sasany haingana ary ny sasany miadana.
Mikasika ny fiadiana amin'ny harerahana, ny fifohana rivotra haingana toy ny Kapalabhati na Bhastrika mety hanampy amin'ny fampitomboana ny saina.
Misy porofo manamarina ihany koa fa mety hanampy amin'ny ady amin'ny tebiteby izy ireo, izay azo omena fa ny tebiteby dia mety hanjary olana bebe kokoa rehefa tsy ampy torimaso ny olona.
Ireo fanao miaina ireo dia azo atao amin'ny toerana rehetra izay mahatonga azy ireo ho mendrika hatao mandritra ny fiatoana any am-piasana na amin'ny fampiononana ao an-tranonao.
10. Raiso kely
Raha miezaka tsy miasa matory ianao, dia mety ho toa miharihary ny manandrana manenjika maso kely mandritra ny andro.
Fa ny maka hatory dia hiasa tsara kokoa amin'ny olona sasany noho ny hafa. Tranga fitsapana sy hadisoana be io.
Mety hifoha ianao rehefa avy natory kely ary nahatsapa ho ratsy kokoa noho ny taloha, na mety hahatsiaro ho mazoto.
Ary ny halavan'ny fotoana hatorianao dia afaka mitana andraikitra lehibe. Azonao atao ny manandrana ny torimaso fohy kokoa sy lava kokoa mba hahitana ny fiantraikan'izany aminao alohan'ny hanapahanao hevitra momba ny fotoana fatoriana tonga lafatra ho anao.
Mazava ho azy fa miankina amin'ny zavatra toy ny hoe afaka matory any amin'ny toeram-piasanao ianao na maharitra hafiriana ny zaza matory raha toa ka manamboatra ny tadinao ianao.
11. Mitsako amin'ny siligaoma sasany
Mino izany na tsia, ny asan'ny siligaoma dia naseho mba hampitombo ny fahamailoana ary mety hanampy ny mpiasa aza hahavita ny adidiny ao anatin'ny iray andro.
Ary tsy maninona izay tsiro fidinao. Mandehana fotsiny mitady izay tianao indrindra, na mifamadiha eo anelanelan'izy ireo.
12. Mofona Peppermint sasany
Fantatrao angamba fa ny fofona mahery sy mena dia mamelombelona tokoa, saingy naseho fa tena mampitombo ny fahamailoana sy ny ady amin'ny harerahana.
Ka na amin'ny diffuser bararata, labozia misy fofona, menaka manitra sasany amin'ny mosara, na avy amin'ny siligaoma (nanampy tombony tamin'ny teboka teo aloha) dia mahazoa dipoifo amin'ny fiainanao.
Ny vokatra mitovy amin'izany dia mety hitranga avy amin'ny kanelina raha izany no tianao.
13. Atombohy amin'ny shower mangatsiaka ny andronao
Tsy misy fisalasalana kely fa ny fahatsapana ny rano mangatsiaka amin'ny hoditrao dia mety hampirisika.
Ka mba handehanana mandritra ny tontolo andro tsy hatoriana dia azonao atao ny manandrana mandro ao anaty rano mangatsiaka, na amin'ny rano mangatsiaka aza amin'ny maraina.
Raha tsy afaka mitantana fandroana iray manontolo ianao amin'ireto fepetra ireto dia afaka misafidy rano mangatsiaka ianao mandritra ny 15-30 segondra farany.
Izy io dia hanome ny sainao sy ny vatanao hikorontana ary hanampy amin'ny fampitomboana ny fifantohanao.
Raha tsapanao fa reraka ianao mandritra ny andro, manandrama manondraka rano mangatsiaka amin'ny tavanao.
14. Mivoaha any ivelany
Tsy manazava ny trano sy ny toeram-piasanao na firy na firy, dia tsy dia mamirapiratra noho ny any ivelany mandritra ny andro antoandro.
Ary io hazavana voajanahary io dia afaka manampy anao hiambina raha mbola tsy natory mihitsy ianao ny alina talohan'izay.
Ka mivoaha amin'ny hazavan'ny andro raha vao afaka maraina ary miato kely any ivelany raha azo atao.
Na ny mipetraka eo am-baravarankely aza dia afaka mampitombo ny haavon'ny hazavana miditra amin'ny masonao, izay afaka manome tombony mitovy amin'izany, na dia kely kokoa aza.
Tsy izany ihany fa ny fiatrehana hazavana voajanahary dia afaka manampy amin'ny fametahana ny gadona «circadian» ary, noho izany, manampy amin'ny fanarahan-dalàna ny torimaso alohan'ny alina.
15. Mangataha fanampiana
Indraindray ianao dia mila mangataka fanampiana fotsiny mba hahitanao ny andro rehefa tsy nomenao torimaso ianao.
Ho an'ny mpiasa, midika izany fa miresaka amin'ny mpanara-maso anao raha te hahavita adidy isan-karazany ianao mandritra ny andro, na mety ho afaka hiasa andro fohy kokoa ianao.
zavatra mahafinaritra azonao atao rehefa mankaleo anao
Ho an'ny ray aman-dreny sahirana manan-janaka kely, dia mety hidika izany hoe manampy fianakaviana na namana hanampy amin'ny fikarakarana ny zaza ianao mba hatory tsara.
Na amin'ny ankapobeny, dia mety hidika amin'ny firesahana amin'ny olona akaiky anao momba ilay toe-javatra mba hahazoana ny eritreriny sy ny torohevitr'izy ireo.
Li R., Chen Y. V., Zhang L. (2019). Ny vokatry ny tempo mozika amin'ny fitondrana fiara lavitra: Iza no tempo-mandaitra indrindra hampihenana ny havizanana? i-Perception, 10 (4), 1–19. doi: 10.1177 / 2041669519861982
Telles, S., Gupta, R. K., Gandharva, K., Vishwakarma, B., Kala, N., & Balkrishna, A. (2019). Vokatry ny fanazaran-tena avy amin'ny taovam-pisefoana yoga amin'ny fiheverana sy fanahiana amin'ny ankizy alohan'ny tanora. Ankizy (Basel, Suisse), 6 (7), 84. doi: 10.3390 / ankizy6070084
Telles, S., Singh, N., & Balkrishna, A. (2012). Ny fahaizan'ny rantsan-tanana sy ny fanavakavahana ny masony aorian'ny fanao yoga roa. Diary iraisam-pirenena momba ny yoga, 5 (1), 37–41. doi: 10.4103 / 0973-6131.91710
Allen, A. P., & Smith, A. P. (2015). Siligaoma mitsako: fahombiazana amin'ny kognita, toe-po, fahasalamana ary fisiolojia mifandraika amin'izany. Fikarohana iraisam-pirenena momba ny BioMed, 2015, 654806. doi: 10.1155 / 2015/654806
Raudenbush, Bryan & Grayhem, R. & Sears, T. & Wilson, I .. (2009). Ny fiantraikan'ny dipoavatra sy ny fitantanana fofona kanelina amin'ny fiambenana, ny toe-po ary ny enta-mavesatra. Gazety psikolojia amerikana avaratra. 11. 245-256.
dia lahy sy mpiahy
ahoana no ilazana raha tia anao ny vehivavy
Undertaker vs undertaker fahavaratra 1994
oviana no mifankatia ny olona